Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed oo bilaabayo Horyaalada Maamul Goboleedyada -
HomeciyaarahaXiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed oo bilaabayo Horyaalada Maamul Goboleedyada
Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed oo bilaabayo Horyaalada Maamul Goboleedyada
December 29, 2016 F.G ciyaaraha, Wararka 0
Xoghaya Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed Cabdiqani Saciid Carab ayaa sheegay in Horyaalkii ugu horreeyey ay ka bilaabi doonaan ilaa siddeed kooxood oo laga kala dhisay Maamul goboleedka Jubbaland halkaasoo uu xiriirku ka saacidayo dhismaha kooxahaasi.
Xoghayaha Xiriirka Kubadda Cagta Cabdiqani Saciid Carab ayaa faahfaahin ka bixiyey muddada ay u qorsheeyeen inuu socda Horyaalka Kubadda Cagta maamul-goboleedka Jubbaland , taasoo ah mid afartan sano kaddib ka billaabanayo maamul goboleedkaasi.
“Waa Horyaal u gaar ah Jubbaland, waana markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya oo horyaal noocaan oo kale ah laga billaabo maamul goboleedka, iyadoo uu socon doono muddo afar ilaa shan bilood ah”.
Xoghayaha xiriirka Kubadda Cagta Cabdiqani Saciid Carab ayaa sheegay in Cayaarahan ay ka hirgelin doonaan maamul goboleed kasta oo dalku leeyihiin, wuxuuna rumeysan yahay iney kaalin ka qaadan doonto tayeyn cayaaraha dalka, gaar ahaan horumarinta Xulka Qaranka Soomaaliyeed.
“Cayaaraha dalka horumarintooda ayuu door ku leeyahay, mana saameyn doonto ciyaarihii kale ee dalka laga qaban jiray sida kuwii maamul goboleedyada ay caasimada isugu imaan jireen iyo horyaalkii guud ee dalka”.
Ugu danbeyntii Soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka soo hoyinin cayaaraha caalamka, waxaana qubarada Isboortiga ay marar badna ku taliyeen in la ballaariyo cayaaraha dalka taasoo wax ka tareysa tayada kooxaha iyo xulka qaranka dalkeena, waxaana la rumeyan yahay qorshahan cusub ee uu billaabay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iney tahay billow fiican oo rajo galineysa cayaartoyda iyo guud ahaan taageerayaasha Soomaaliyeed.